Afar Maalin ka dib guurkooda ayuu furay, Cebteydana Banaaka ku Faafiyay (Qiso Xanuun Badan ) | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Guurka Afar Maalin ka dib guurkooda ayuu furay, Cebteydana Banaaka ku Faafiyay (Qiso Xanuun Badan )
Afar Maalin ka dib guurkooda ayuu furay, Cebteydana Banaaka ku Faafiyay (Qiso Xanuun Badan )
Bulsha:- Tasnim Bakar ayaa ka Sheekeeysay Qis o Xanuun badan o ku dhacday, taas oo badashay rajadi wayned ay ka lehed Nolosha iyo in ay mar noqoto Xaas la qabo oo yelata Guri iyo Caruur.
Ninka ay guursatay gabadhaan ee rajo baylka ku riday ayey si kadis ah isku barteen, is waraysi ka dib waxaa soo baxday in ay daris yahiin, wada shekaysi badna ka dib waxaa ka dhex abuurmay jacayl aad u baaxada wayn, oo labad alamaane, kala gaaren her aysan kala maarmi karin.
Mudo ka badan sadex sano ayuu xiriirkooda Socday, ugu danbayn waxaa aybku heshiyeen Tasniim iyo Wiilka ay sida saa`idka ah isu jecel yahiin guur, taas oo ugu danabayn labada qoys ay aqbaleen.
Lamaanaha is calmaday waxaa loo dhigay Xaflad Aroos aad u qiima saraysa, iyada oo farxad iyo rayn rayn lagu aqal galay ayaa mar qura waxaa wiilkii usoo baxay line uu wadamad aReer galabeedka ku aadayay, wuxuuna ka war helay abar Wadaysay in ay Timid Xaafadooda kana war heshay Arooskiisa oo markaa Laba Malin Socday.
Gabadhii oo aad u caraysana ayaa ku tiroi gabdhahada Fur hadii aad Doonayso in aan ku wado hadii kale waan kaa dhaqaajinaa, isaga wuu ka aqbalay, gabdhiina Meeshaasi ku dalaaqay Wajigana Ka saaray muro ay ku qasbanatay in Guriga aysan ka soo bixin mudo.